Versão: Afrikaanse: Xhosa
Gênesis 1:1 Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi.
Gênesis 1:2 Ke ehlabathini kwakusenyanyeni, kuselubala; kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. UMoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo.
Gênesis 1:3 Wathi uThixo, Makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya.
Gênesis 1:4 Wakubona ke uThixo ukukhanya ukuba kulungile, wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama.
Gênesis 1:5 Wathi uThixo ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wokuqala.